« prev 1 … 2 3 4 5 … 884 next »
Somaliland oo sheegtay inay shiidaalka iyadu dalka keeni doonto
Sagal Radio Services • News Report • September 6, 2019
Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inay dalka keeni doonto shiidaalka,isla markaana shirkadaha soo dajiyaa ay dawladda ka iibsan doonaan.
Midowga Afrika oo laga codsaday inuu Ergey gaar u magacaabo muranka Badda ee Somalia iyo Kenya
War murtiyeed ka soo baxay Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika oo dhowaan shir gaar ah ka yeeshay muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa loogu baaqay labada dhinac inay ka fogaadaan ficil kasta oo khatar gelin kara xiriirka deris wanaagga ee ka dhaxeeya labada dal.
Dadweyne ka barakacay dagaal beeleed oo dib ugu laabtay deegaanadoodii (Sawiro)
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa soo gaaray magaalada Xeraale ee gobalka Galguduud si uu u hubiyo dhaqan gelinta heshiiskii nabadeed ee reer Huurshe iyo reer Xeraale ay ku wada saxiixdeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad gobaleedka Galmudug.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo sheegay in Kenya ay qarka u saaran tahay inay ka baxdo Dacwadda Badda
Sagal Radio Services • News Report • September 5, 2019
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir ayaa sheegay in dowladda Kenya ay qarka u saaran tahay inay ka baxdo Kiiska Dacwadda Badda.
Wafdi ka socda QM iyo Bankiga Adduunka oo Muqdisho imanaya
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 12-ka Bishan uu Muqdisho soo gaari doonaan wafdi heer sare ah oo ka kala socda Jamciyadda Quruumaha ka dhaxeysa iyo Bankiga Adduunka.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeeray xarumaha ciidamada magaalada Dhuusamareeb
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeeray xarumaha ciidamada Booliiska, kumaandoosta Danab iyo nabad sugidda kuwaasoo ka qayb qaadanaya adkeynta amniga magaalada Dhuusamareeb inta ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta Gallmudug iyo dhismaha dowlad gobaleedka Galmudug loo dhanyahay.
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha Hirshabelle oo gaaray magaalada Beledweyne
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Maanta gaaray Magaalada Beledweyne iyadoo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Magaalada Beledweyne.